Fiampangana Fanaovana Hosoka Ny Lisi-pifidianana Hôngroà Nandritra Ny Fifidianana Farany Tao Kroasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2016 9:58 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, Español, English
Sary fampahafantarana an'ilay horonantsary tamin'ny 2012, “Resaho aho,” ahitàna an'ilay mpilalao sarimihetsika teratany Kroaty-Hôngroà Csilla Barath Bastaić.
Nitombo be ny isan'ny olona nisoratra anarana hifidy amin'ny maha-foko Hôngroà teo anelanelan'ireo fifidianana roa farany tao Kroasia. Fa nahoana? Ny sasany milaza fa noho ny heloka voalamina izany, nitanisa fampitahorana sy nanao kolikoly hanomezana antoka ny fandresen'ilay mpifaninana tian'ny antoko mpitarika ny firenena amin'izao fotoana.
Raha toa ka efa aretina iombonan'ireo Balkans ny fanaovana hosoka amin'ny fifidianana, tsy olana goavana kosa izany tanatin'ireo fifidianana tao Kroasia tanatin'ireo taona vitsy lasa. Noho ny kizo izay nanery ny mpandresy, HDZ mpifikitra amin'ny fomban-drazana, hanangana fiaraha-mitantana amin'ireo antoko madinika anefa, dia avo tsy araka ny tokony ho izy ny lanja politika an'ireo solombavambahoaka mety “hisavilivily” nandritra ireo fifidianana ny 11 Septambra.
Ahitàna mpikambana 151 ny Parlemanta Kroaty, voafidy hiasa efa-taona tamin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina. Mitsinjara araka ireo faritra fifidianan'ny Parlemanta Kroaty ireo seza: mpikambana 140 ao amin'ny parlemanta no fidiana ao amin'ireo fari-pifidianana maro seza, 8 avy amin'ny vitsy an'isa, ary 3 avy amin'ny zanaka ampielezana Kroaty. Ny fifidianana ireo solombavambahoakan'ny vitsy an'isa dia hataon'ireo mpifidy izay mitono-tena ho anisan'ny iray amin'ireo vitsy an'isa izay mandrafitra eo amin'ny ampahafolon'ny vahoaka eo ho eo (Serba, Bosniaka, Italiana, Romani, Hôngroà, Slovenes, Tseky, sy ny sisa).
Ireo valim-pifidianana ho an'ny solontenan'ny firenena Hôngria vitsy an'isa ao amin'ny parlemanta any Kroasia. Dikasary avy amin'ny Vaomieran'ny Fifidianam-panjakana ao amin'ny Repoblikan'i Kroasia.
Mampiseho ireo vokatra vonjimaika fa resin'i Robert Jankovics, izay mifandray akaiky amin'ny antoko HDZ ao amin'ny elatra havanana, ny solombavambahoaka am-perinasa avy ao amin'ny elatra havia Šandor Juhas, izay nanome soso-kevitra ny mba handinihana ilay voalaza ho tsikombakomba niarahana tamin'ny antoko mpitarika an'i Hôngria, Fidesz sy ny governemantany. Samy mpikambana ao anatin'ny Antokon'ny Vahoaka Eoropeana ny HDZ sy ny Fidesz.
Mampiseho ny fandinihana ny rakitry ny mpifidy ao Kroasia nataon'ny vohikala T-Portal fa nitombo 852 ny isan'ireo mpifidy izay nitono-tena ho mpikambana ao amin'ny foko vitsy an'isa ao Hôngria, teo anelanelan'ireo fifidianana mahazatra tamin'ny Desambra 2015 sy ireo fifidianana voalohany tamin'ny Septambra. Niantraika tany amin'ny elanelana manify, eo amin'ny vato 300 eo, manasaraka ilay solombavambahoaka am-perinasa avy ao amin'ny elatra havia sy ny mpifanandrina aminy avy ao amin'ny elatra havanana io fitomboana kely teo amin'ny vaton'ireo mpifidy avy any amin'ny foko Hôngroà io.
Araka ireo tatitra azo avy amin'ny media mpampiely vaovao ao Kroasia sy any amin'ny faritra dia nandroba ny sasany tamin'ireo vahoaka marefo indrindra any amin'ireo faritra ambanivohitra any atsinanan'ny firenena ireo andrim-panjakana, isan'izany ireo masoivoho misahana ny resaka sosialy, izay araka ny tatitra dia nanery ireo vondron'olona hanova ny foko nisoratany anarana.
Nisy sehonà tsy fanjariana hafa ihany koa teo amin'ny fifidianana. Niantso mpitandro filaminana i Zorica Blažević, mpifidy tany Kamenac, hitaterany fa voasoratra anarana ho Hôngroà izy na dia avy amin'ny foko Kroaty aza:
‘Osim obećanja o boljoj socijalnoj pomoći, agitatorica nije prezala ni od zastrašivanja. ‘Rekla je da će mi uzeti kuću i sina i da ćemo imati problema s policijom, a ja sam se onda uplašila.’
Ankoatra ny fampanantenana hampiakatra ny tombontsoako ara-tsosialy isam-bolana, dia nandrahona ahy ihany koa ireo mpanakorontana. Nilaza izy ireo fa haka ny trano fonenako sy ny zanako lahy ary hahita raharaha amin'ny mpitandro filaminana izahay, izay nampatahotra ahy.
Araka ireo tatitra samihafa, misy hetsi-panentanana miafina mizotra amin'izao, enti-manohitra ny foko Romani, ampiasàna tsindry ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ho fanampin'ireo fanentanana ara-bola, nosarihana tamin'ny alàlan'ny fonosana mirakitra voninkazo, siramamy, ranon-tsavony fandroana, ary sôkôlà ihany koa ireo mpifidy.
Andrasana hanambara ireo voka-pifidianana ofisialy ny Vaomieran'ny Fifidianam-panjakana ao Kroasia ny Alatsinainy 26 Septambra. Tsy fantatra na hiresaka mikasika ireo fiampangana voalaza etsy ambony ireo manam-pahefana. Na dia heloka bevava aza ny fanaovana kollikoly sy fandrahonana any Kroasia, mahalana ny fandefasan'ireo niharan'izany tatitra ofisialy any amin'ny mpitandro filaminana, noho ny tahotra.